योसेमाइट ओएस एक्स मा IOS9नोटहरू कसरी हेर्नुहोस् आईफोन समाचार
नयाँ अनुप्रयोग IOS9नोट्स यो धेरै र सबैको राम्रोको लागि परिवर्तन भएको छ। अब हामी कुनै पनि नोटमा बिभिन्न ब्रशको साथ चित्रण गर्न सक्दछौं, हामी मल्टिमेडिया फाइलहरू थप्न सक्दछौं र अधिक अनुप्रयोगहरूसँग साझा गर्न सक्छौं। म जस्तो प्रयोगकर्ताका लागि यो पर्याप्त भन्दा बढी छ र म निश्चित छु कि यो पनि बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताहरूको लागि हुनेछ, यद्यपि यो सत्य हो कि केही बढी परिवर्तनको लागि माग अपर्याप्त हुन सक्छ।
कुनै पनि प्रयोगकर्ता जसले नेटिभ आईओएस नोट्स अनुप्रयोग प्रयोग गर्दछ, आफ्नो आईफोन, आईपड वा आईप्याड आईओएस to मा अपडेट गरेको छ, र ओएस एक्स योसेमाइटको साथ म्याकबाट नोटहरू पहुँच गर्न कोसिस गरेको छ, एक नराम्रो आश्चर्यको लागि हुनेछ: योसेमाइट समर्थित छैन नयाँ नोटका साथ। त्यसोभए हामी के गर्छौं? हामी नोटको प्रत्येक अन्य मेलमा पठाउन सक्दछौं, तर यो एक चीजको साथ कष्टकर हुन्छ जुन बढी स्वचालित हुनुपर्दछ। भाग्यवस, जीवनमा प्रायः सबै चीजसँग समाधान हुन्छ।
समाधान नोटको वेब संस्करण पहुँच गर्नु बाहेक अरु कुनै होइन। यसको लागि हामी निम्न कार्यहरू गर्नेछौं:
योसेमाइटबाट आईओएस notes नोटहरू कसरी पहुँच गर्ने
हामी कुनै पनि खोल्छौं ब्राउजर इन्टरनेट बाट
हामी जाँदै छौं www.icloud.com.
हामी भित्र आयौं टिप्पणीहरू.
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो सजिलो हुन सक्दैन। तपाईलाई सबै थाहा पाउनुपर्दछ कि यो सम्भावना अवस्थित छ, केहि चीज जुन मलाई हालमा थाहा थिएन। नोटहरू अनुप्रयोग जुन तपाइँ आईक्लोउड.कटमा देख्नुहुनेछ आईओएस as को जस्तो होइन, तर तपाईं चिन्ता गर्नु हुँदैन। ओएस एक्स एल क्यापिटान अहिलेको जस्तो छैन र संभवतः लामो समयसम्म छैन, यद्यपि मलाई आशा छ कि यो भविष्यमा हुनेछ। यस समयमा, एल क्यापिटनको संस्करणमा, तपाईं फोटो र छविहरू थप्न सक्नुहुनेछ (केवल नोटमा तिनीहरूलाई तान्नुहोस्), तर फ्रिह्यान्ड चित्रण गर्न सम्भव छैन वा आईओएस available मा उपलब्ध शासकको साथ। तपाईंले सोच्न सक्नुहुन्छ कि हामी ट्र्याकप्याड वा माउस राम्रोसँग तान्न सक्दैन, तर हामी पूर्वावलोकनमा हस्ताक्षरहरू प्रयोग गर्न सक्दछौं, त्यसो भए ... तपाई के पर्खिरहनु भएको छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईओएस to मा अपडेट भयो र योसेमाइटमा तपाईंको नोटहरू देख्न सक्दैन? त्यहाँ एक तरीका छ
नमस्कार, प्रश्नको लागि माफ गर्नुहोस्, यद्यपि यो हालको शीर्षकसँग सम्बन्धित छैन, यो भनिन्छ कि आईओएस सँग किबोर्डमा दुई औंलाहरू राख्ने विकल्प छ एक लेखको चयन सक्रिय पार्न र परिमार्जन गर्न वा मेटाउन, तर आईफोन in मा प्लस आईओएस with को साथ काम गर्दैन, यो कार्य ss को लागि मात्र हो?
नमस्कार, सोलोमन। अहिले यो आईप्याडमा मात्र काम गर्दछ। भविष्यमा जबसम्म यो परिवर्तन हुँदैन, यो केवल आईफोन s एस र s एस प्लस (फोनको) द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईफोनको लागि यो पहिलो बेटामा उपलब्ध थियो, तर यो हुनु रोकियो त्यसैले म विकासकर्ताहरूको लागि तेस्रो बिटामा सोच्दछु (र पहिलो सार्वजनिक)।
इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा, म बुझ्दिन कि यो किन उपलब्ध छैन, जबसम्म यो आईफोन s एसमा अतिरिक्त कुराको औचित्य नदिईकन केही यस्तो छ जुन मलाई सही लाग्दैन।
मानिस तिमीले बुझ्दैनौ, यो बुझ्न सजिलो छ त्यसैले तपाईले आफ्नो पुरानो आईफोन बेच्नुहुन्छ आईफोन6लाई मानिन्छ र तपाईले नयाँ किन्नुहुन्छ, जुन आईफोन s एस हो पक्कै त्यो नवीकरण गर्नुहोस्।
एडी एडगर भन्यो
नमस्ते पाब्लो, मैले भर्खर आईओएस to लाई मेरो आईफोन अपडेट गरें र म छक्क परें कि सिरीले अब यो गरिरहेको २ बिप्स बनाउँदैन, अब यो केवल कम्पन हुन्छ, यो सामान्य छ र मँ बिप्स बनाउन के गर्न सक्छु जुन त्यस बेलामा थियो। आह्वान गर्दै सिरीमा फर्कनुहोस्।
एडी एडगरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते एडी। यो सामान्य हो। आईप्याडमा यो ध्वनि हुन्छ र जब तपाईं यसलाई सुन्नुहुन्छ सिरि पनि सुन्नुहुन्छ। यो परिवर्तन हो।
धन्यवाद पाब्लो, मैले एक क्षणको लागि सोचे जुन मेरो आईफोनमा ग्लिच थियो।
माइक्रोसफ्ट सीईओ आईओएस को लागी आउटलुक को प्रदर्शन को लागी "आईफोन प्रो" को उपयोग गर्दछ